Mfe Steak Switzerland - Ezi Ntụziaka
Ezi ntụziaka maka taco itinye na anụ ehi
nri ụtụtụ casserole na ude nke ọkụkọ ofe
kedụ ihe ị ji efe ọkụkọ piccata
nri anụ ezi juru na ite
Mfe Steak Switzerland
Steak Switzerland bụ nri abalị ezinụlọ zuru oke ọ dị mfe ịme ma sie ya na oven ma ọ bụ na-eji nwayọ nwayọ. Nri a nwere anụ ezi anụ na-atọ ụtọ na tomato gravy bara ụba ma na-arụ ọrụ zuru oke na osikapa, noodles ma ọ bụ nduku mashed!
Steak Switzerland bụ otu n'ime nri ndị ahụ m na-akpakọrịta na nkasi obi m toro na-eri nri a maka mgbede Sọnde, ma ka m na-eto, ọ ghọrọ otu n'ime nri ndị ahụ na-agụ m agụụ. Bọchị ndị a ọ bụ nhọrọ nri abalị kachasị amasị ezinụlọ. Anyị niile hụrụ ya n'anya maka ụtọ ahụ na-enweghị atụ, mana kwa, dịka onye na-azụ ahịa maka ezinụlọ m, enwere m ekele na ibe anụ adịghị oke ọnụ nwere ike bụrụ ihe dị nro ma na-atọ ụtọ!
A na-enwekarị steak Switzerland Nkume Salisbury , ma onwere ihe di iche na ha abuo. A na-eji anu ehi Salisbury ejiri anu ehi ma mee ya ka o buru ihe ozo ebe ebe a na-ahu nri nke Switzerland! Salisbury Steak n’ozuzu nwere ofe a na-amịrị amị na-ata anụ ebe Switzerland steak nwere tomato na-esi nri.
ọkụ taco itinye na ude chiiz
Ana m esi nri esi nri Switzerland a na oven, ma echegbula ma ọ bụrụ na ịnweghị oven oven ! You nwere ike sie ya na ighe eghe wee nyefee ya na efere achicha maka ịchicha, ma ọ bụ ịnwere ike itinye ya na ite ite maka awa asaa ruo asatọ iji rie nri abalị mgbe ị si ọrụ lọta.
Mgbe ị na-akwadebe ibe gị nke Switzerland, jide n'aka na ị ga - akụ steaks gị ka ọ dị nro (M na-eji a mallet ịke softizer ). Nwere ike iji steaks gbara gburugburu ma ọ bụ nke siri ike, nke bụkarị anụ siri ike karị, yabụ usoro nro dị mkpa.
Kwere m mgbe m kwuru na ọ dịghị ihe dị mma dị ka ịnwe nri abalị na-ekpo ọkụ nke jupụtara na nkasi obi site na nnukwu ekpomeekpo nri na ude mmiri ara ehi ahụ!
4,96site na94votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri3 awa Oge zuru ezu3 awa iri na ise Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly NilssonSteak Switzerland bụ nri abalị ezinụlọ zuru oke ọ dị mfe ịme ma sie ya na oven ma ọ bụ na-eji nwayọ nwayọ. Nri a nwere anụ ezi anụ na-atọ ụtọ na tomato gravy bara ụba ma na-arụ ọrụ zuru oke na osikapa, noodles ma ọ bụ nduku mashed! Bipute Ntụtụ
▢1 ½ paụnd steak gburugburu
▢½ iko ntụ ọka
▢½ ngaji paprika
▢½ ngaji ose
▢abụọ tablespoons mmanụ oliv ma obu dika odi nkpa
▢abụọ eyịm gbanwere
▢abụọ karọt gbanwere
▢otu nwere ike diced tomato na ihe ọ juiceụ juiceụ 28 ounce
▢otu nwere ike beef efere 10 oz
▢otu ngaji Worcestershire ihendori
▢otu ngaji ọka nhọrọ, lee ihe edeturu n'okpuru
Iji anụ mallet, paụnd anụ ka ″ ″ ọkpụrụkpụ.
Ikpokọta ntụ ọka, paprika, garlic ntụ ntụ, ose & nnu nụrụ ụtọ. Dredge anụ na ngwakọta ntụ ọka.
Kpoo 1 tablespoon nke mmanụ oliv n'elu ọkụ ọkụ na oven. Agba aja aja n'akụkụ ọ bụla (na-agbakwunye mmanụ oliv ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa). Wepụ ya.
Tinye yabasị & karọt na ala nke ite ahụ. Top na aja aja aja.
Tinye ihe ndị ọzọ fọdụrụ ma e wezụga maka ọka ọka. Kpuchie ma sie nri maka awa 2 ½-3.
Na-eje ozi n'elu nduku nduku.
Ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ nri gramikọ tomato, mgbe isi nri wepu beef na ite ahụ. Ikpokọta ọka na 1 tablespoon mmiri. Weta mmiri mmiri na ite ahụ na obụpde. Gbanye na slurry cornstarch slurry ma bido ruo mgbe o buru ibu.
Calorisị:Ogbe 439,Carbohydrates:31g,Protein:42g,Abụba:iri na iseg,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:Ogbe 107mg,Sodium:456mg,Potassium:Ogbe 1213mg,Eriri:4g,Sugar:9g,Vitamin A:5460IU,Vitamin C:25.5mg,Calcium:Ogbe 125mg,Iron:6.8mg
IsiokwuSteak Switzerland N'ezieNri abalị Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
i nwere ike ime a ite ite na oven
Cheesesteak ihe eji ede ede
Ngwa ji esi nri Salisbury Steak